बुवा पारसले हेलमेट नलगाएपछि छोरी कीर्तिकाले गरेको यस्तो ट्वीट बन्यो भाइरल, त्यस्तो के लेखेकी थिइन् ? — Imandarmedia.com
काठमाडौ। बेलबेला विवादमा तानिरहने पूर्वयुवराज पारस शाह फेरि एकपटक अलिहे चर्चामा छन् । उनले शुक्रबार साँझ हेल्मेट नलगाएर मोटरसाइकल चलाएपछि ट्राफिक प्रहरीले रोक्न खोज्दा लफडा गरे।
जिब्रो लरबरिएको आवजमा उनले प्रहरीलाई तँ भनेका थिए। र प्रहरीले सम्झाएर उनलाई पठाउन खोज्दै उल्टै जान्न जान्न भन्दै उल्टै प्रहरीमाथि दूर्व्यवहार गरेका थिए। यो विषयमा पारसकी छोरी कीर्तिकाले शनिबार साँझ गरेको ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
उनले ट्वीट गर्दै यो विषयमा बुवा पारसको पक्ष लिदौ प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले प्रहरीले उल्टो आफ्नो बाबुमाथि दूर्व्यहार गरेको बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘हेलमेट छुटेको बिषयलाई प्रहरीले मर्यादापूर्वक व्यवहार गरि आफ्नो ड्युटी पूरा गर्नु पर्नेमा अपमानजनक ब्यबहार गरेको छ।’
हेल्मेट नलगाएको भन्दै प्रहरीले शाहलाई समात्न खोजेपछि हिजो विवाद भएको थियो। प्रहरी र पारस शाहबीच झगडा भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। प्रहरीको फन्दामा परेपछि प्रहरीले हात समातेर घर जान अनुरोध गर्दा उल्टै जाइलागेर जान्नँ भन्दै नाकतिर औंला तेर्स्याएर अड्डी कसेका थिए ।
उनले चढेको यो मोटरसाइकल हार्ले डेभिड्सनको सफटेल हेरिटेज १९९५ मोडल हो। यो बाइक हाल नेपालस्थित नेपालको शोरुममा उपलब्ध छैन। उक्त मोडलको मोटरसाइकल नेपाल ल्याइएमा ८५ देखि ९० लाखसम्म पर्नसक्ने हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकलको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक आईएमई अटोमोटिभ्सका म्यानेजर महेश थापाले जानकारी दिए।
‘यो मोटरसाइकल हामीले नै सर्भिसिङ गरेका हौं। लामो समयदेखि थन्काएको मोटरसाइकल भएपनि यसमा त्यति जटिल समस्या थिएन,’ उनले भने।
यसै गरि ,भर्खरै २० बर्ष पुगेकी पूर्वराज परिवारकी सदस्य पूर्णिका शाह ३ बालबालिकाकी अभिभावक बनेकी छिन्। आफ्नो पढाई खर्च कटाएर उनले तीन जना बालबालिकाका अभिभावकत्तो ग्रहण गरेकी हुन्। पूर्वयुवराज पारस र युवराज्ञी हिमानीकी जेठी छोरी पूर्णिका अहिले अध्ययनका क्रममा थाइल्यान्डमा छिन्।
इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातक अध्ययनरत उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्वीर र स्टाटसहरू अपडेट गरिरहन्छिन्। उनी अहिले २० बर्षकी भएकी छिन्। सानै उमेरमा उनले समाजसेवातर्फ आफूलाई केन्द्रीत गरेकी छिन्। उनको यो कर्म देखेर बुवा पारस शाह चचित बनेका छन्।
उनले ३ जना बालबालिकाको अभिभावकत्व लिएको जानकारी गराएकी छिन्। उनले ती ३ जना बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षासम्मको शैक्षिक खर्च ब्यहोर्ने जिम्मा लिएकी हुन्।
सर्लाहीमा रहेको सामाजिक संस्था होस्टे हैसेलाई आर्थिक सहयोग दिएर उनले तीन बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षासम्म नै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन्।
उनले भिडियो सार्वजनिक गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडी रहेको सर्लाहीमा विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको शैक्षिक खर्च सहयोग गरेर साथ दिन विश्वभरीका मानिसहरुलाई अपिल समेत गरेकी छिन्। उनले युवा अवस्थामा नै यो सेवाको काम गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताएकी छिन्।
होस्ट हैसे नामको सामाजिक संस्था सन् १९९० मा दर्ता भएको हो। यसको संस्थापक अध्यक्ष सुलोचना श्रेष्ठ शाह हुन्।होस्ट हेसेको प्रयास प्रशंसा योग्य छ। स्वास्थ्य बीमा, भविष्य कोष सुविधाहरू, निशुल्क शिक्षा, मातृत्व बिदा सहितको अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम यसले सञ्चालन गरिरहेको छ।
मैले आफ्नो ‘ड्रिम ब्वाइ’ भेटिसकेँ, पूर्णिका शाह: राजतन्त्र ढलेपछि आम नागरिकमा परिणत भएको पूर्वराजपरिवारप्रति अहिले पनि जनचासो उत्तिकै छ । पछिल्लो समय युवा पुस्तामा चर्चा कमाइरहेकी पूर्वराजपरिवार सदस्य हुन् पूर्णिका शाह ।
२० वर्षमा हिँडिरहेकी पूर्णिका अहिले धेरै कुरा बुझ्ने भइसकिन् । सामाजिक सञ्जालमा फलोअर्सहरूले उनलाई ‘शालिन’ र ‘बौद्धिक’ भनेर प्रशंसा गर्ने गर्छन् । पूर्णिकाले हालै फलोअर्सहरूसँगको अन्तरक्रियामा आफ्नो निजी जीवनका केही रहस्योद्घाटन गरिन् । उनले आफू प्रेममा रहेको संकेत गरेकी छिन् ।
एक प्रश्नकर्ताले पूर्णिकालाई ‘तपाईंको ड्रिम ब्वाइ कस्तो हुनुपर्छ ?’ भनी सोधेका थिए । यसमा पूर्णिकाले जवाफ दिएकी छन्, ‘मलाई लाग्छ, मैले आफ्नो ड्रिम ब्वाइ भेटिसकेँ ।’
पूर्णिकालाई एउटा नमीठो प्रश्न पनि सोधिएको छ । ‘तपाईंका बुबा र हजुरबुबाले वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको हत्या किन गरे ?’ एकजनाले सोधे ।त्यसलाई पूर्णिकाले जवाफ फर्काएकी छिन्, ‘यदि तपाईंलाई यो कुरा साँचो लाग्छ भने मलाई किन फलो गर्नुहुन्छ ?’
पढाइ सिध्याएपछि सधैंका लागि नेपाल फर्किने उनको भनाइ छ । साथै भविष्यमा कुनै आध्यात्मिक कर्ममा संलग्न हुने योजना पनि उनले सुनाएकी छन् । पूर्णिकासँगका अन्य केही रमाइला प्रश्नोत्तर यस्ता छन् ।
पूर्णिका : सबैको माया र साथलाई हामी कदर गर्छौं । प्रश्न : तपाईंको प्रेरणा स्रोत को हो ?
पूर्णिका : मेरी आमा । प्रश्न : तपाईंको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो र तपाईं तनाव र दबाबलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ? पूर्णिका : मेरी आमा नै मेरो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले सधैं मलाई राम्रो मान्छे बन्नलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो ।
प्रश्न : तपाईंले कहिल्यै कसैलाई थप्पड हान्नुभएको छ ? पूर्णिका : अँ, हानेकी छु । प्रश्न : रोमान्टिक फिल्म कि हरर फिल्म रुचाउनुहुन्छ ?
पूर्णिका : हरर। प्रश्न : थाइल्यान्डमा तपाईं कुन कारमा यात्रा गर्नुहुन्छ ? तपाईंसँग कतिवटा कार छन् ? पूर्णिका : मसित कार छैन । म यहाँ सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्छु । प्रश्न : तपाईं आफ्ना भाइबहिनीसँग कत्तिको झगडा गर्नुहुन्छ ? पूर्णिका : हामी त कुकुर र बिरालो जस्तै झगडा गरिरहन्छौं ।
प्रश्न : तपाईंको चम्किलो त्वचाको रहस्य के हो ? पूर्णिका : स्न्यापच्याट फिल्टर ! प्रश्न : तपाईंले आफ्नो भाइका फ्यानगर्लहरूको टिकटक हेर्नुभएको छ ? पूर्णिका : हेरेको छु । ‘क्युट’ छ । प्रश्न : तपाईं शाकाहारी हो ? पूर्णिका : अहिले होइन । भविष्यमा हुन्छु होला ।
प्रश्न : तपाईंको भाइबहिनीको सबैभन्दा राम्रो गुण के हो ? पूर्णिका : उनीहरूको हृदय कोमल छ । प्रश्न : तपाईं कहिल्यै एकान्तमा रुनुभएको छ ? पूर्णिका : रोएको छु ।
प्रश्न : मैले तपाईंका बारेमा दुईवटा कुरा सुनेको छु । तपाईंले संस्कृत पढ्नुभएको छ र तपाईं नेपाली भाषामा राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ । यी कुरा सत्य हुन् ? पूर्णिका : म संस्कृत जान्दिनँ र नेपालीमा कविता पनि लेख्दिनँ।
मतदान केन्द्रबाट खुकुरीसहित एक युवक प्रहरी नियन्त्रणमा
राष्ट्रपति राजापाक्षे परिवारको घरमा आगजनी, एक सांसदकाे मृत्यु
भारतिय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउदै, मिति नै तोकियो
रुसको ४० लडाकु विमान ध्वस्त बनाउने युक्रेनका सैनिक कमाण्डर मारिए
काँग्रेसबाट निष्कासित जगन्नाथको चुनाव चिन्ह ‘भुइँकटहर’, रेणु दाहालसँग प्रतिस्पर्धा
नेपालको प्रस्तावः मलेसियामा कार्यरत नेपालीको पारिश्रमिक बढाउनुपर्छ
वेपत्ता वामदेब गौतम यस्तो अवस्थामा भेटीए, नेताहरु सबै चकित